Boko Xaram oo ku dhawaaqday maamul Islaami ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Kooxda Islaamiga ah ee Boko Xaram ee ka dagaalanta qeybo kamid ah dalka Nigeria ayaa ku dhawaaqday in maamul Islaami ah ay u sameeyeen Magaalada Gwoza oo ku taal waqooyiga dalkaas.
Boko Xaram ayaa usuurto gashay in markii ugu horeesay si buuxda gacanta ugu dhigaan Magaalo ku taala dalka Nageria ayna halkaasi ka dhisaan Maamul Islamai ah oo kooxdaasi hoostaga.
Hogaamiyaha Boko Xaram, Abubakar Shekau fariin Muuqaal ah soo diray ayaa shaaca ka qaaday in Maamul Islamai ah ay u dhiseen Magaalada Magaalada Gwoza ee Dalka Nageria.
Milateriga Nigeria ayaa waxba kama jiraan ku tilmaaay warka kazoo yeeray Boko Xaram, waxeyna sheegeen iney sii wedayaan dagaalka ka dhanka ah kooxdaas oo dad badan leysay.
Dhanka kale, wararka ka imaanaya waqooyi bari Nigeria ayaa sheegaya in kooxda Boko Haram ay ku qaadeen weerar weyn magaalada Gambora Ngala, halkaasi oo ay ku xasuuqeen in ka badan 300 oo rayid ah bishii May ee la soo dhaafay.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaal daran uu ka dacay agagaarka saldhigga boliiska iyo saldhig Militery, kumanaan dad ah ayaa u cararay xadka Cameroon.
Afhayeenka milatariga Cameroon ayaa sheegay in ku dhawaad shan boqol oo ciidanka Nigeria ay ka gudbeen xuduuda, hubkiina laga dhigay
Ciidanka Cameroon ayaa sheegay in askarta ay kala carareen kadib markii ay kula dagaalameen Boko Xaram magaalada Banki
Weerarka ayaa yimid maalin kaddib markii Boko Haram ay kaga dhawaaqeen Khilaafo Islami dhulka ay maamulaan ee waqooyi bari Nigeria.